Chikamu: Mapurisa emigwagwa, Kudzidziswa, Kodzero
Chikoro chechikoro chekutya chinoshanda kwenguva yakareba sei? Mufananidzo we vn pahupenyu -okonchanii-avtoshkoly-srok-dejstviya Inoretically chidziro chekupedzisa kwechikoro chekutyaira ibhuku rehurumende imwechete seimwe yeimwe pamusoro pekupedza chikoro chekudzidzisa, asi ...
Ndeipi chirango chekufambisa motokari imwe nzira kuenda kumusangano? Kana iwe uchikwanisa kuratidza kuti kwakanga kusina bhenje, zvino zvichazotora rwendo, asi kana zvisingaiti, ipapo kwekutanga kokutanga 4 mwedzi kufamba, zvino zvakare ...
Ndechipi chikwangwani chekudzidziswa mune imwe chikoro chekutyaira, kureva kuti, panguva ipi iwe unogona kutora kurudyi? Chikwangwani chokupedza zvikoro zvekutyaira hachina mutemo wekukanganisa. Zvakafanana nedhipatimendi pachikoro. Like any ...
Zvinorevei kutenga kodzero dzeboka B? Ini ndinotsigira zvose zviri pamusoro apa. dzidza. uye uzvitore iwe pachako. SADA yakanyorwa ropa. zivo yemitemo ichaponesa hupenyu hwako. pamwe pachava nekudada kuti ivo pachavo vakapfuura, tenda kunzwa kwakanaka.
Ungashandura sei kodzero dzekare dzeSoviet kune itsva? Ndinofanira kuongororazve here? kodzero dzakabudiswa mugore re1975 Kudzidza hakuzouya, uye mhinduro dzichauya, asi izvi hazvina maturo, vhiki nebhuku muna ...
Nzira yekuti "kuenderera" zvakanaka pamberi pekutya pamusoro pechando Panofanira kunge kune nguva yakakwana pamotokari dzinofambisa, zvisinei hazvo hazvizopindi muchikwata uye motokari inofamba sechando, maererano, kutumirwa kunofanira ...
Mapurisa emapurisa, hurumende inobata basa rekuita, dambudziko rimwechete ... zvichida mumwe munhu akabudirira? pane chigwaro chinofanira kuva chisimbiso kubva pauchi. pakati pawakabvunzurudzwa. Panofanira kunge iripo ...
chii chirango chinoiswa pamotokari yemotokari kunze kwechikamu B, asi kune chikamu C muchidimbu: kubva ku5 kusvika ku15 zviuru makumi rubles + kupirwa chirango! Chinyorwa 12.7 chikamu 1 cheMutungamiri Wemutemo weRussian Federation: https: //temuri.ru/ezda-bez-kategorii / ...
nzira yekuita sei chikamu che "overpass" pane dunhu? Ndinokurudzira pamusoro pemuedzo kuti uende nokuti ini murayiridzi wakandidzidzisa .. Kunyange iye pachake anozviita zvakasiyana ... Asi iyo ndeyekuongorora iyo iye ...
Dzorera hovha yekutya yebiwa! Kurasikirwa vakarasika. kubiwa kana kukuvadzwa VU uye chidziro chekunyorwa kwemotokari yaunoda kuti utaure naMREO OGIBDD, kwaunonyora chikumbiro chekubudisa VU itsva uye ...
Ndeapi rudzi rwechiremba vanoda kuenda kundowana uchi. reisensi yekutyaira? Isu tine commission iri pasi pemapurisa emigwagwa .. pane chirwere cheuropatologist ... an oculist ... uye ndizvo ... 15 maminitsi ... rubatsiro pamaoko echiiti chinobva kune chirwere chemauropsychiatric ...
pavanopinda mumigwagwa yemigwagwa nguva dzose vakamira, pane pane chinangwa chokunyunyutira uye ndingaenda kupi? Edza kushanda, unogona kuisa chiratidzo kana kuisa chinyorwa, kana iwe unofananidzira zvinonzwisisika, nemari kubva ku ...
Ndechipi musiyano pakati petikiti "D" uye А3? Ndezvipi zvinonzi K-700 D uye Belaz ndiA3? Zviri pachena kuti D iyo inokubvumira kudana mumugwagwa. Endai kune imwe sangano iri ...
Mushure mekupi kwei nguva iyo mitengo ye State Traffic Safety Inspectorate inogona kubviswa nokuda kwekusabhadhara? kuburikidza negore re1 kana pane chikamu chevashandi veGhibd hachina kuedza kukutevera iwe pasi, kana kuedza kwakadaro kuchiitwa uye mapurisa emigwagwa ...
Iko mari yakawanda kutenga kutenga "guta" rekuongorora mumapurisa emigwagwa? Rambai kwemakore mashomanana. 2 gore rakapfuura, 15 zviuru makumi mabhesi akabhadharwa nekuda kwekutambudzika kusina. Kubva sezvo dhora risina kuchinja zvakanyanya, mari, ...
Ndezvipi zvinyorwa zvaunoda kuva nazvo apo iwe unyoresa kuchikoro chekutyaira. izvo zvipi? Muchikoro chekutyaira? Hapana . Iwe uchauya nepasipoti, ivo vachaudza munhu wese ipapo .. mari uye pasipoti yePasipoti, chiremba chechiremba uye zvipupuriro kubva kuna vanambuya, ...
Chii chaunofanira kuita mushure mokupedza kuongorora mumapurisa emigwagwa, mushure mokuwana kodzero? Russia, Moscow, unoenda kwawakatumira nhasi, uya kunehwindo reumwe munhu ndokuti, ndibatsire, taura kudaro uye zvakadaro, zvino ...
Mibvunzo ye32 mu database yakagadzirwa mu 0,430 masekondi.